Fihemotra tetsy Tsimbazaza :: Mahabe ahiahy ilay tolo-dalàna fanomezana zom-pirenena • AoRaha
Fihemotra tetsy Tsimbazaza Mahabe ahiahy ilay tolo-dalàna fanomezana zom-pirenena
Nahemotra amin’ny fotoana manaraka ny fandinihina sy ny fankatoavana na tsia an’ilay tolo-dalàna fanitsiana ny fahazoana mizaka ny zom-pirenena malagasy, teny amin’ny Antenimierampirenena. Ny fahabetsahan’ ny ahiahy manodidina an’io volavolan-dalàna, fa teo koa ny adihevitry ny olom-pirenena, izay nampiseho ny tsy fankasitrahana azy, no isan’ ny anton’izao famerenana ny fandinihina lalina an’io tolo-dalàna io izao.
Nilaza ho mahatsapa ny maha zava-dehibe ny fanitsiana an’ity lalàna ity eto amin’ ny firenena ireo solombavambahoaka ka samy niray feo amin’ny hanemorana ny fivoriana mialoha ny fankatoavana azy. «Tsara raha hatrehin’ny rehetra ny famerenana fandinihina azy mba hahafahana mandray ny soson-kevitry ny tsirairay. Tsy voafakafaka tsara rahateo izy io. Tanjona ny fandrindrana azy hifanaraka amin’ny fenitra iraisam-pirenena», hoy ny depiote Lovanirina Fiarovana Celestin, izay namolavola an’ilay lalàna.
Heveriny fa tokony hafîndra amin’ny fivoriana ara-potoana manaraka mihitsy aza ny fotoana maha mety ny hampidirana an’io tolo-dalànaio ao anatin’ny lahadinika. «Mbola tsy feno ny fepetra nahafahana niroso tamin’ny fandinihana satria mila mandray anjara tamin’ ny fivoriam-baomiera, ohatra, ny solontenan’ny minisiteran’ ny Mponina», hoy hatrany itsy depioten’i Betafo itsy.
Lalàna efa tamin’ny volana 22 jolay 1960 no lasitra niaingana momba ny fizakàna ny zom-pirenena malagasy. Nasiam-panovana indroa miantoana izany: tamin’ny taona 1995 sy 2016 saingy misy teboka maromaro ilàna fanitsiana hatrany mba hifanaraka amin’ny fenitra iraisam-pirenena.
Niadiana hevitra tao amin’ ny tambajotran-tserasera, ohatra, fa manome tombondahiny an’ireo vahiny amin’ ny fividianana tany eto amintsika io tolo-dalàna fanitsiana io. « Diso fandraisana avokoa ireo olom-pirenena rehetra. Tsy maintsy hohazavaina tsara ireo fanitsiana ireo», araka ny fanamarihan’ny depiote Johasy Eleonore, mpikambana ao amin’ny vaomieran’ny Fitsinjaram-pahefana. «Tsy misy resaka fanomezana tany izany mihitsy ao », hoy indray ny depiote Lovanirina Fiarovana Celestin.
Miombona amin’izao fanapahan-kevitry ny solombavambahoaka izao ihany koa ireo teknisianina avy amin’ny governemanta ary nandrisika ny tokony hampivelarana bebe kokoa ny adihevitra amin’ireo hery velona rehetra eto amin’ny firenena. Isan’izany ny fiarahamonimpirenena. Samy nilaza koa anefa ireo depiote fa ilaina ny fanavaozana an’io lalàna io.
«Na izany aza, aoka haha malina antsika rehetra ireny hevitra nivoaka tamin’ny tambajotran-tserasera ireny. Lasa toy ny hoe mpivarotra tanindrazana isika depiote raha ny fijerin’ny olona kanefa tsy izany mihitsy ny dikan’io lalàna io», raha ny fanampim-pànazavan’ny depiote Keron Idealson, omaly.
Nandroso hevitra amin’ny fakàna ny hevitr’ireo mpitondra fivavahana ihany koa iry depioten’Ampanihy iry, mba tsy hivaona amin’ izay tanjona kendrena ny famolavolana ny tolodalàna. « Tanjona hatrany am-boalohany ny fanomezana ny zom-pirenena ho an’ireo olona tena tsy nisitraka an’izany mihitsy kanefa miaina eto an-tanindrazana », araka ny fanamarihana nataon’ireo depiote.
Fiadidiana ny repoblika :: Natosiky ny finiavana hanompo tanindrazana ny tale vaovaon’ny Serasera